दुई 'पाइलट' को झगडामा पिसिएका कुलमान :: Setopati
अमित ढकाल भदौ ३०
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नचाहेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ कम्तिमा अहिलेका लागि बिदा भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली कुलमानको पुनः नियुक्तिको पक्षमा छैनन् भन्ने पहिल्यैदेखि थाहा थियो। तै पनि कुलमानले गरेका काम र आम नागरिकमाझ उनको जुन छवि बनेको छ, त्यस कारण पनि अन्तिममा उनको पुनः नियुक्ति हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो।
कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति नदिनुपर्ने कारण के-के हुन्, बालुवाटारले बताएको छैन। अनौपचारिक कुराकानीमा भने कुलमानप्रति बालुवाटारका तीन मुख्य गुनासा वा आरोप छन्।
पहिलो, लोडसेडिङ हटेको र प्राधिकरणले गरेका सम्पूर्ण कामको जस उनले एक्लै लिन खोजे। आफू मात्रै 'हिरो पल्टिन' खोजे। राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै जस दिएनन्, टेरेनन्।
दोस्रो, आफ्ना पक्षमा मिडिया परिचालन गरे। प्राधिकरणको पैसामा विज्ञापन दिएर आफ्नो प्रचारप्रसार गराए।
तेस्रो र सबभन्दा संगीन आरोप— कुलमानले बिजुलीका ठेकेदारहरूलाई भनेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिए।
त्यो बेला कुलमान प्राधिकरणमा आएको करिब चार महिना मात्र भएको थियो। उनी आएपछि लोडसेडिङ जादुमयी ढंगले हराएको थियो। लोडसेडिङ हटेकोमा धेरै महिनासम्म त मानिसहरूलाई विश्वास पनि भएन। अर्को वर्ष हिउँदमा पनि लोडसेडिङ नभएपछि मात्र आममानिसलाई अब नेपालमा लोडसेडिङ हुन्न भन्ने पत्यार लाग्यो। कुलमानको 'जय-जयकार' सुरू भएको त्यसपछि हो।
हेर्नुस्, त्यो कुराकानीको सम्पादित भिडिओ।
पहिलो, हिउँदको सुख्खा याममा खोलामा पानी कम हुन्छ र बिजुली कम उत्पादन हुन्छ। तर, नेपालमा पाँचवटा 'डेली पिकिङ' आयोजनाहरू छन्— कालीगण्डकी, चिलिमे, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो र मध्य-मर्स्याङ्दी। यी आयोजनामा रात र दिनभरी पानी जम्मा गरेर साँझ बिजुलीको माग धेरै भएका समय चलाउन मिल्छ। यी सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा ३५० मेगावाट जति थप बिजुली उत्पादन हुन्छ।
'माघ-फागुनलाई साँच्नुपर्ने आयोजना अहिल्यै चलाएर कुलमान हिरो हुन खोजिरहेको छ। माघमा लोडसेडिङ झनै विकराल हुन्छ' भन्दै कतिले विरोध गरे।
प्राधिकरणमा कुलमानअघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले त्यो बेला एउटा टिभी कार्यक्रममा घोषणा गरे— 'माघमा पनि कुलमानले लोडसेडिङ गरेनन् भने म आजीवन सार्वजनिक पदमा बस्दिनँ।'
एउटा कुरा भने साँचो हो— आममानिसले लोडसेडिङ हट्नुको जस कुलमानलाई मात्र दिए। 'चोरहरूको लाम' मा राम्रो काम गर्ने मानिसको खोजी मिडियालाई पनि सधैं हुन्छ। त्यसैले मिडियाले पनि उनका कतिपय काम बढाइचढाइँ गर्‍यो होला। आलोचनात्मक दृष्टि कमै राख्यो होला। त्यसले पनि राजनीतिज्ञ, उनका प्रतिस्पर्धीलाई पक्कै जलन गरायो। अहिले बालुवाटारबाट आएको जलनको गन्ध पनि त्यसकै परिणाम हो।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्ति पाएका कुलमानले उनलाई नै सहयोग गरेको र आर्थिक भरथेग गरेको बालुवाटार ठान्छ। प्रचण्डका अरू आर्थिक स्रोत कमजोर भएको अवस्थामा बिजुलीका ठेक्कापट्टाबाट आउने लाभ नै उनको आर्थिक 'लाइफ-लाइन' भएको प्रधानमन्त्री निकटहरूको आरोप छ।
राम्रो काम गरिरहेका कुलमानको त्यो 'वैध हक' नकार्न प्रधानमन्त्रीले पनि सकेको देखिन्न। आफूले गरेका काम र आफ्ना आगामी योजनाबारे बताउन कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अघिदेखि भेट्न खोजेका थिए। दुई-तीन महिनादेखि कोशिस गरे पनि बालुवाटारले समय दिएको थिएन। गएको शनिबार उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने भनियो, फोन आउँछ भनियो। उनी कुरेर बसे, फोन गएन।
तर, कुलमानका आँखामा हेरेर 'तिमीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्दिनँ' भन्न सकेनन्। जनताका आँखामा हेरेर प्रधानमन्त्रीले झन् के भन्लान्?
भ्रष्टाचारमा लिप्त र हरेक काण्डमा मुछिएका नेता घुमिफिरी दशकौंसम्म सांसद बन्न, मन्त्री बन्न मिल्ने। 'सम्धी'हरू सातपटक फरक-फरक पोस्टमा सरकारी नियुक्ति खान मिल्ने। तर, राम्रो काम गर्ने क्षमतावान् मानिस दोहोरिन नमिल्ने?
हाम्रो राज्यमा क्षमतावान् कुलमानहरूको काम छैन, अवसर पाउन हाम्रो 'हनुमान' नै हुनुपर्छ भन्ने हो?